September 2016 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
ဖုန်းမှာ လွယ်ကူစွာတည်းဖြတ်ကောင်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - VideoShow Pro Video V7.0.0 Cracked APK [LATEST]
Android / Tablet ကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ချစ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တွေအတွက် ဖုန်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ စာသား၊ ဂီတ၊ အသံ ၊filter တွေကို ဗီ...
ဖုန်းမှာ လွယ်ကူစွာတည်းဖြတ်ကောင်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - VideoShow Pro Video V7.0.0 Cracked APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:03 PM Rating:5Android / Tablet ကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ချစ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တွေအတွက် ဖုန်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ စာသား၊ ဂီတ၊ အသံ ၊filter တွေကို ဗီ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:03 PM No comments:
Ringtone Maker Pro V1.0.3 APK [LATEST]
Android / Tablet ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကာ Ringtone Maker Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက်နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းမြည်သံ...
Ringtone Maker Pro V1.0.3 APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:24 PM Rating:5Android / Tablet ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကာ Ringtone Maker Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက်နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းမြည်သံ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:24 PM No comments:
ဖုန်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့် Facebook အကြောင်း၊ အီးမေးလ်အကြောင်း၊ Android apk ရေးသားခြင်း အကြောင်းများကို အလွယ်တကူ ...
Myanmar iT Learning Apk Reviewed by Thiha Htike on 12:56 PM Rating:5ဖုန်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့် Facebook အကြောင်း၊ အီးမေးလ်အကြောင်း၊ Android apk ရေးသားခြင်း အကြောင်းများကို အလွယ်တကူ ...
Thiha Htike at 12:56 PM No comments:
စမတ်ဖုန်း စတင် အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အခြေခံ ဗဟုသုတများ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လေ့လာနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသည့် App ဖြစ်သည်။ ...
ဖုန်းသမား လက်စွဲကျမ်းကြီး Reviewed by Thiha Htike on 12:54 PM Rating:5စမတ်ဖုန်း စတင် အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အခြေခံ ဗဟုသုတများ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လေ့လာနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသည့် App ဖြစ်သည်။ ...
Thiha Htike at 12:54 PM No comments:
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော NIPDA ယိုးဒယား Handset(နစ်ပ်ဒါ)
ဈေးကွက်ထဲကို ၀ယ်သူဦးစားပေးဈေးနူန်းချိူတဲ့ NIPDA ယိုးဒယားHandest(smart phone) အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတာပါ... ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်.....
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော NIPDA ယိုးဒယား Handset(နစ်ပ်ဒါ) Reviewed by Thiha Htike on 11:28 AM Rating:5ဈေးကွက်ထဲကို ၀ယ်သူဦးစားပေးဈေးနူန်းချိူတဲ့ NIPDA ယိုးဒယားHandest(smart phone) အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတာပါ... ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်.....
Thiha Htike at 11:28 AM No comments:
David and Goliath (2015) HD ရုပ်သံ/အကြည်
IMDb မှာ Rating:7.9/10 (468 votes) ရရှိထားတဲ့ Action ၊ Adventure ၊Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစား ပါ။ရောမဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက် တင်...
David and Goliath (2015) HD ရုပ်သံ/အကြည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:14 AM Rating:5IMDb မှာ Rating:7.9/10 (468 votes) ရရှိထားတဲ့ Action ၊ Adventure ၊Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစား ပါ။ရောမဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက် တင်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:14 AM No comments:
YouTube Video Downloader Pro V5.7.4+9.9 Mb Crack [LATEST]
YouTube Video Downloader Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထွက်ရှိလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Facebook ၊ Vimeo နှင့် အခြာ...
YouTube Video Downloader Pro V5.7.4+9.9 Mb Crack [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:48 PM Rating:5YouTube Video Downloader Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထွက်ရှိလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Facebook ၊ Vimeo နှင့် အခြာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:48 PM No comments:
XBO V17 MT6572 5.1 Flash Tool @ Firmware
ခုတစ်လော အလုပ်တွေက တစ်ကယ်မအားတာကြောင့် တောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကများနေလို့ ခုလည်း အရေးကြီး လိုအပ်နေလို့ ဆိုပီ တောင်းထားတဲ့ XBO V...
XBO V17 MT6572 5.1 Flash Tool @ Firmware Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:48 PM Rating:5ခုတစ်လော အလုပ်တွေက တစ်ကယ်မအားတာကြောင့် တောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကများနေလို့ ခုလည်း အရေးကြီး လိုအပ်နေလို့ ဆိုပီ တောင်းထားတဲ့ XBO V...
AURORA -AU401-FlashTool @ Firmware
ရှားပါးတဲ့ AURORA ထဲ့ကမှ Model -AU401 FlashTool @ Firmwar လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုလိုအပ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တင်...
AURORA -AU401-FlashTool @ Firmware Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:46 PM Rating:5ရှားပါးတဲ့ AURORA ထဲ့ကမှ Model -AU401 FlashTool @ Firmwar လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုလိုအပ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တင်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:46 PM No comments:
Samsung Lollipop 5.0 နဲ့ Marshmallow 6.0 တွေအတွက် Myanmar Font One Click Tool
Samsung ဖုန်းတွေရဲ့ version 5.0 နဲ့ 6.0 ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာကို One Click နဲ့ထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ Tool လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tool ...
Samsung Lollipop 5.0 နဲ့ Marshmallow 6.0 တွေအတွက် Myanmar Font One Click Tool Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:44 PM Rating:5Samsung ဖုန်းတွေရဲ့ version 5.0 နဲ့ 6.0 ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာကို One Click နဲ့ထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ Tool လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tool ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:44 PM No comments:
ဟိုးအရင်က စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေလိုအပ်လာရင် ဂူဂဲမှာ ရိုက်ရှာပြီး လေ့လာရတယ်။ ၂၀၁၁ လောက်ကတည်းက စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရှာဖွေလိုက်ရင် မြန်မာ...
မြန်မာလယ်သမားတွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကိုလေ့လာနိုင်မယ့် - Green Way V1.7.3 Cracked APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:23 PM Rating:5ဟိုးအရင်က စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေလိုအပ်လာရင် ဂူဂဲမှာ ရိုက်ရှာပြီး လေ့လာရတယ်။ ၂၀၁၁ လောက်ကတည်းက စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရှာဖွေလိုက်ရင် မြန်မာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:23 PM No comments:
Automatic Call Recorder Pro v5.20 Cracked APK [LATEST]
ဖုန်းအ၀င်အထွက်တွေကို record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ application အများကြီးထဲမှအကောင်းဆုံး application All In One ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲကောင်းလေးပါ။ဖု...
Automatic Call Recorder Pro v5.20 Cracked APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:03 PM Rating:5ဖုန်းအ၀င်အထွက်တွေကို record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ application အများကြီးထဲမှအကောင်းဆုံး application All In One ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲကောင်းလေးပါ။ဖု...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:03 PM No comments:
ဟန်းဆက်တစ်လုံးမ၀ယ်မှီသိထားရမည့် ၀ယ်သူဘက်မှ သဘောထားအချက်အလက်များ
မင်္ဂလာပါ တစ်သက်သိန်းအောက် ဟန်းဆက်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ သူများအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် ရွှေးချယ်တတ်အောင်တင်လိုက်ပါပြီ။ မင်္ဂလာပါ ဟန်းဆက်တစ်လုံးဝ...
ဟန်းဆက်တစ်လုံးမ၀ယ်မှီသိထားရမည့် ၀ယ်သူဘက်မှ သဘောထားအချက်အလက်များ Reviewed by Thiha Htike on 12:51 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ တစ်သက်သိန်းအောက် ဟန်းဆက်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ သူများအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် ရွှေးချယ်တတ်အောင်တင်လိုက်ပါပြီ။ မင်္ဂလာပါ ဟန်းဆက်တစ်လုံးဝ...
Thiha Htike at 12:51 PM No comments:
မောင်မောင်ဇော်လတ်သီချင်းများ စုစည်းမှု Ⓜ Ⓖ__ Ⓜ Ⓖ__ⓏⒶⓌ__ⓁⒶⓉⓉ 01. မိုးနတ်မင်းကြီးဆီသို့ http://pc.cd/sMkotalK 02. ရပ်စောင့် http://...
မောင်မောင်ဇော်လတ်သီချင်းများ စုစည်းမှု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:20 AM Rating:5မောင်မောင်ဇော်လတ်သီချင်းများ စုစည်းမှု Ⓜ Ⓖ__ Ⓜ Ⓖ__ⓏⒶⓌ__ⓁⒶⓉⓉ 01. မိုးနတ်မင်းကြီးဆီသို့ http://pc.cd/sMkotalK 02. ရပ်စောင့် http://...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:20 AM No comments:
ကေအေတီရဲ့အစီအစဉ် အများသုံးဘာသာစကား - ဟယ်ရီလင်း၊ ဘိုဘို၊ ခရစ္စတိုဖာ၊ စီယံ၊ ညီပုလေး၊ ညီငယ်၊ ဟန်ထွန်း Iron Cross , D မြင့်မိုးအောင်၊ ...
ကေအေတီရဲ့အစီအစဉ် အများသုံးဘာသာစကား Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:17 AM Rating:5ကေအေတီရဲ့အစီအစဉ် အများသုံးဘာသာစကား - ဟယ်ရီလင်း၊ ဘိုဘို၊ ခရစ္စတိုဖာ၊ စီယံ၊ ညီပုလေး၊ ညီငယ်၊ ဟန်ထွန်း Iron Cross , D မြင့်မိုးအောင်၊ ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:17 AM No comments:
ရှမ်းလေး - ရပ်တန့်မသွားဘူး (2016)
Band - Born Free Lyric - El Phaw , Linn Aung , Pho Khwar , Pho Tay , Shan Lay MIXING & Mastering - Han Sai STUDIO - Yin Yin Phot...
ရှမ်းလေး - ရပ်တန့်မသွားဘူး (2016) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:12 AM Rating:5Band - Born Free Lyric - El Phaw , Linn Aung , Pho Khwar , Pho Tay , Shan Lay MIXING & Mastering - Han Sai STUDIO - Yin Yin Phot...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:12 AM No comments:
Ah Nge - Lyrics apk..
အငဲ (၉) ခွေ သီချင်းစာသား apk များ နှင့် ပူးတွဲတင်ဆက်မှု Ah Nge - Lyrics apk Size - 21.6MB Download link > https://my.p...
Ah Nge - Lyrics apk.. Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:07 AM Rating:5အငဲ (၉) ခွေ သီချင်းစာသား apk များ နှင့် ပူးတွဲတင်ဆက်မှု Ah Nge - Lyrics apk Size - 21.6MB Download link > https://my.p...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:07 AM No comments: